Qabuuraha ka qaalisan guryo badan! - BBC Somali
Qaar ka mid ah Ragga uu tujaarta ka dhigay dagaalka daroogadda ee Mexico waxaa la dhigaa maydkooda ama lagu duuggaa, qabuuraha ugu qaalisan ee aad waliga arki karto.
Waxay yaallaan xabaallo waa wayn oo leh qaboojiyeyaal, muraayadaha xabaddu aanay karin, iyo qolka fadhiga gabi ahaan.
Waa mid aan dhici karin oo kana fog meel lagu aaso ama la dhigo in badan oo ka mid ah tobanaan kun oo lagu dilay kuwaas oo lagu duugo xabaallo wadareedyo ama looga tagay meydkooda oo ka laadlaada buundooyinka.
Dad geerida ka dib ka rajo qaba nolol adduun
Qiimaha qaar ka mid ah [qabriyadaas] ayaa lagu iibiyaa ama la rumeysan yahay in qiimahoodu gaarayo £ 230,000 Pound.
Toban sano ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii ugu horreysay ee dowladda Mexico ay ciidammo u dirto la dagaalanka daroogadda.
Laakiin tahriibiyayaasha waawayn ee ganacsiga daroogadda , kuwaas oo ka taajiray ayaa awoodda in xaabalahoodda u diyaarsadaan hab heer sare oo qaali ah, kuwa kale oo badanna waa riyo ay ku riyoon karaan oo kaliya.
Qabuurahaas ayaa ka dhisan gobolka Sinaloa, halkaas oo uu ka soo jeedo caaqilka ganacsiga daroogadda ee xabsiga ku jira ee lagu magacaabo Joaquin "El Chapo" Guzman.
Qabuurahaas midkood oo lagu magacaabo Jardines del Humaya wuxuu ku yaal magaaladda Culiacan ee caasimadda gobolka Sinaloa, halkaaas waa meelaha ay ku yaallaan qabuurahaas qaaliga ah.
"Waa tilmaan awoodda ay lahaayeen xilli iyo muujinta waxa ay doonnayeen waligood, taasi oo ah mid dabiici u ah ruux kasta oo aadane ah" ayuu yiri Juan Carlos Ayala oo Professor ka tirsan Jaamacadda Autonomous University ee gobolka Sinaloa .
"Waxay kaloo taasi u muujinaysaa kuwa badbaaday in ninkaasi uu ahaa muhiim" ayuu sii raaciyey Ayala."
Laakiin xukuumadda Mexico ayaa hadda ka xaajoonaysa siddii ay u mamnuuci lahayd arrintan istustuska ah si caruurta looga joojiyo inay ku daydaan habka nolasha loo hanaqaltaagayo.
"Ka ganacsiga daroogadda wuxuu ku faafayaa bulshadda, iyada oo loo marayo dhaqanka, hadda waxaan arkaynaa dhibaatadda aynu ku qabno innaan aragno, iyadoo midna uu bilaabanayo midnna uu dhamaanayo" ayuu yiri Ayala.
Guriga uu ka dhex samaysan yahay Qabri uu ku jiro nin dilaa ah ayaa wuxuu leeyahay kaamirooyinka amaanka kuwaasi oo ku xiran halka laga soo galo si la mid ah muraayadaha aanay xabaddu karin, qaybta sare wuxuu ku leeyahay Nal calaamadda isu tilaabta, gudahana waxaa ku jira afar seef oo ay celinayso muraayad.
Qabri kale ayaa wuxuu la mid yahay guri casri ah, qaarkood ayaa waxaa haatan ka muuqda geedka Kirishtaanka. Laakiin qaarkood ma leh magac tilmaamaya qofka ku jira qabrigaas.